Masinina mamotika semi-mando mora vidy ho an'ireo mpamatsy zezika voajanahary sy orinasa | YiZheng
Inona ilay milina fanorotoroana semi-wet material?
ny Masinina mamotika semi-wet dia fitaovana manorotoro matihanina ho an'ny fitaovana misy hamandoana avo sy fibre maro. nyM avooisture Milina fanosehana zezika mandany ny rotors amin'ny dingana roa, midika izany fa mihombo sy midina ny fanosihosena roa. Rehefa omena amin'ny alalàn'ny rotor ambonimbony ho an'ny fikosoham-bary ny akora, ary avy eo entina mankany amin'ny rotor ambaratonga ambany mba hanohizana hikororoka vovoka tsara hahatratra ny haben'ny sombiny tsara indrindra ho an'ny dingana manaraka. Tsy misy sivana sivana eo ambanin'ny Masinina mamotika semi-wet. Noho izany ny fitaovana mando dia mety hotorotoroina ary tsy hosakanana mihitsy. Na ireo fitaovana vao nalaina avy tao anaty rano aza dia potehina, ary tsy misy ahiahy momba ny sakana na sakanana. ny Masinina mamotika semi-wet dia ampiasaina amin'ny famokarana sy fanodinana zezika biolojika, ary misy vokany tsara amin'ny akora toy ny zezika sy asidra humika.
Ampiasaina ny milina fanosorana akora semi-wet?
Masinina mamotika semi-wet dia ampiasaina amin'ny fanorotoroana ny fambolena voajanahary biolojika, ny fanondranana ny zezika any an-tanàn-dehibe, karbonina fotaka ahitra, fako ambanivohitra, fako voajanahary indostrialy, mololo, fiompiana ary zezika akoho sns.
Ny mampiavaka ny milina fanorotoroana semi-wet
1.Ny rotor an'ny Masinina mamotika semi-wet fananganana dia mandray endrika sy firafitra misaina. Miaraka amin'ny lelan-tsolika roa, ny fahombiazany manorotoro dia avo roa heny noho ny milina fanosehana hafa. Ny fitaovana dia miditra amin'ny ampahany manosika avy ao amin'ny lavaka famahanana, avy eo potehina ho vovoka tsara.
2.It dia mampiasa marmara mitafy mafy firaka. Ny sombin-tantanana dia voafitaka hampanantena fa matanjaka sy mitafy mafy izy ireo mba hahalava ny androm-piainan'ny serivisy.
3.Ny rakotra fanaovan'ity zezika zezika ity dia nohosoran'ny takelaka vy sy kalitao avo lenta. Mandany fanamarinana henjana mifanaraka amin'ny famokarana sy ny takian'ny teknolojia manokana.
4.Ny Masinina mamotika semi-wet amidy dia misy rafi-pitotoana roa hanorotoroana tsara ireo fitaovana ary hahomby amin'ny fahombiazana.
5.Adoptting fehin-kibo miovaova. Ny motera elektrika dia mitondra ny fehikibo fehikibo izay mamindra ny heriny amin'ny axis lehibe, ka mihodina haingana amin'ny famotehana ireo fitaovana.
Tombony azo amin'ny milina fanorotoroana semi-wet material
1) Fampiharana marobe sy fahamendrehana avo lenta. Ity milina ity dia tsy manana ny ambany amin'ny alàlan'ny efijery, noho izany karazana fitaovana maherin'ny 100 no azo potehina ary tsy hosakanana mihitsy ilay masinina.
2) Fikolokoloana tsotra. Ity milina ity dia mandray ny haitao misy elanelana roa. Raha tonta no anaovana, dia azo ampiasaina indray ilay marmara aorian'ny famindrana ny toerany.
3) Fiantraikany tsara. Ny milina dia mampiasa ny rotor pulverized dingana roa, ary ny fitaovana aloha dia potipotehina ho potika kely ary avy eo potehina ho vovoka manify.
4) Asa fitehirizana asa ary tsotra ny fandidiana. Mampiasa teknolojia avo lenta izy, olona iray ihany no afaka miasa mora, tsy hoe azo antoka sy azo itokisana ihany, fa manamora ihany koa ny fikojakojana.
Fampisehoana horonan-tsary milina fanosotra semi-wet
Safidy maodely fanorotoroana milina semi-wet
Haben'ny potika (mm)
Haben'ny Hammer fohy
130x50x5 = 70 pies
130x50x5 = faribolana 24
180x50x5 = faribolana 32
300x50x5 = faribolana 72
Haben'ny Long Hammer
180x50x5 = faribolana 36
240x50x5 = faribolana 48
350x50x5 = faribolana 48
Halavany × sakany × haavony
Teo aloha: Granulator avo roa heny
Manaraka: Masinina mpamaky vovoka rojom-bary